के छन् न्यौपानेको एजेण्डा ? एनआरएनए सह–कोषाध्यक्षमा न्यौपानेको उम्मेदवारी -
के छन् न्यौपानेको एजेण्डा ? एनआरएनए सह–कोषाध्यक्षमा न्यौपानेको उम्मेदवारी
१४ आश्विन २०७८, बिहीबार १८:०७
एमए, बिएलसम्मको अध्ययन पूरा गरेका न्यौपाने अध्यात्म र साहित्यमा पनि रूचि राख्छन् । पशुपति मन्दिर लण्डनको ट्रस्टी मेम्बर रहेका न्यौपानेले जीवन विज्ञान यूकेको स्थापनाका लागि विशेष पहल गरेका थिए । उनी अन्तरास्ट्रिय स्तरमा क्रियाशिल ‘प्रो इलाइट क्लब’ मा पनि सक्रिय छन् ।
जीवन बिज्ञानको माध्यमबाट सबैलाई मन, विचार र कर्म स्वस्थ्य र शुद्ध राख्न तथा प्रो इलाइट क्लब मार्फत लगानी सम्बन्धि ज्ञानका अनुभव बाड्दै सबैलाई सम्बृद्ध बनाउन क्रियासिल रहेका छन । सामाजिक कार्य र च्यारिटी संस्थामा आबद्ध उनी बेलायतस्थित धेरै संघसंस्थामा सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत छन ।
संस्थाको अन्तरिक सुशासन, पारर्दर्सिता, आत्मनिर्भरता, एकता, संघको प्रभावकारितामा बिसेष पहल गर्ने बिबिध योजनासहित सामाजिक र वित्तीय क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभब संघमा लगाउने उद्देस्यले एनआरएनए एनसिसीको सह कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको न्यौपानेले बताए ।
न्यौपानेले विश्वमा रहेका गैरआवासिय नेपालीलाई आफुलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन ।
महिला चेम्बरको १५ दिने दशै तिहार बिशेष व्यापार मेला शुरु
एमालेले बहिष्कार गरे सर्वदलीय बैठक